Saameynta dib u eegista internetka | Martech Zone
Jimco, Abriil 27, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Waxaan dhawaan bilownay inaan la shaqeyno Liiska 'Angie's List' waxayna horeyba noo ahayd indho fure noo ah inta meheradood ee ay ku hogaaminayaan iyaga qiimeynta, dib u eegista iyo heshiisyada. Ganacsiyada maxalliga ah ee macaamiishooda siiya adeeg aad u weyn, dib u eegista lagu sameeyay ee ku qoran Liiska 'Angie's List' waa dakhli saafi ah.
Marka loo eego Sahaminta Suuqgeynta Raadinta Ganacsiga Yaryar ee American Express OPEN, ganacsiyada yaryar ee Mareykanka wali waxay ku kalsoonaan karaan ereyga-afka oo ah dariiqa ugu sarreeya ee ay dukaameystayaashu ku heli karaan. Dhawaanshaha gadaal, si kastaba ha ahaatee, waa internetka. Macaamiisha maxalliga ah hadda waxay aad ugu tiirsan yihiin awoodda mashiinka wax raadinta markay wax ka iibsanayaan gudaha. Waxaan eegeynaa waxa ay uga dhigan tahay meheraddaada yar.
Milo, ah helitaanka alaabta internetka, ayaa ku dhejiyay shaxdan xog uruurinta iyagoo la hadlaya awoodda dib u eegista internetka.
Tags: Liiska AngieGanacsiga maxaliga ahmiloFaallooyinka internetkaReviews